Alshabaab oo gubay gaari Dhuxul siday - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Alshabaab oo gubay gaari Dhuxul siday
Alshabaab oo gubay gaari Dhuxul siday
April 9, 2019 admin402
Wararka laga helayo deegaano hoostaga degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in Maanta barqadii xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay gubeen Gaari dhuxul u soo waday Magaalada Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Gaariga uu dhuxusha ka keenay deegaano kale oo ka tirsan Shabeellaha dhexe,waxaana xilliga la gubayey uu mareyey deegaan lagu Magacaabo laba Buundaale oo ku yaalla inta u dhaxeysa deegaanka Basra iyo degmada Balcad ee Wadada u dhaxeysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad.
Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay gaarigan ay gubeen Al-Shabaab. ururka Alshabaab ayaa u muuqda mid qandaraas ku qaatay in dhuxusha laga joojiyo Muqdisho, taas badalkeedana ay isticmaalaan Gaaska iyo korontada.
Dadka qaar ayaa tilmaamaya in Alshabaab Dhaqaale ka qaateen shirkadaha Gaaska keena, Alshabaab ayaa lagu yaqaan in ay mamnuucan alaabaha qaar iyagoo ka eegaya dhaqaale ay ka helaan.
Naafada Xoogga Dalka oo Markale ku banaanbaxay Madaxtooyada
Hirshabeelle oo baaq u dirtay Hay’addaha Gargaarka
Wararkii ugu dambeeyey ee colaadda Xeraale